Mila mianatra momba an’Andriamanitra ianao, raha te ho namany. Fantatry ny namanao ve ny anaranao? Azo inoana fa fantany izany, ary miantso anao amin’izany izy ireo. Tian’Andriamanitra ho fantatrao sy hampiasainao koa ny anarany. Jehovah no anaran’Andriamanitra. (Salamo 83:18; Matio 6:9) Tsy maintsy mianatra izay zavatra tiany sy tsy tiany ianao. Tokony ho fantatrao koa hoe iza no namany ary iza no fahavalony. Mila fotoana ianao mba hahafantarana tsara olona iray. Milaza ny Baiboly fa hendry ianao, raha manokana fotoana mba hianarana momba an’i Jehovah.—Efesianina 5:15, 16.
Manao izay tian’Andriamanitra ny namany. Mbola ho tia anao ve ny namanao raha ampijalinao, na zavatra tsy tiany no ataonao? Mazava ho azy fa tsia! Tokony hanao izay tian’Andriamanitra koa ianao, raha te ho namany.—Jaona 4:24.
Tsy ny fivavahana rehetra no tian’Andriamanitra. I Jesosy no naman’Andriamanitra akaiky indrindra. Nilaza izy fa misy lalana roa andehanan’ny olona. Ny iray malalaka sady be mpandeha, nefa mankany amin’ny fandringanana. Ny iray kosa tery sady vitsy mpandeha, nefa mankany amin’ny fiainana mandrakizay. Ny fivavahana arahin’ny olona no oharina amin’ny lalana. Tsy maintsy mamantatra izay fivavahana tian’Andriamanitra àry ianao, raha te ho namany.—Matio 7:13, 14.
Antsoina hoe Mahery Indrindra, Mpamorona, ary Tompo Andriamanitra. Hita im-7 000 eo ho eo ao amin’ny Baiboly anefa ny tena anarany.